जहाँ सिंगो गाँउ नै नाङ्ग्लो बुन्ने पेसामा आबद्ध छन् ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
जहाँ सिंगो गाँउ नै नाङ्ग्लो बुन्ने पेसामा आबद्ध छन् !
September 7, 2018 Nepal E News
ओखलढुंगा, २२ भदौ । जहाँ सिंगो गाँउ नै नाङ्ग्लो बुन्ने पेसामा आबद्ध छन् ! ओखलढुंगाको सदरमुकाम नजिकै रहेको एउटा सिंगो गाँउ नै नाङ्ग्लो पेसामा आबद्ध छन् । सिद्धिचरण नगरपालिका ५ बर्णलु स्थित डाँडाखर्कका ८५ घर परिवारको बसोबास रहेको सिंगो गाँउ नै बाँसबाट बनिने नाङ्ग्लो बुन्ने पेसामा आबद्ध भएका हुन् ।
समाजजहाँ सिंगो गाँउ नै नाङ्ग्लो बुन्ने पेसामा आबद्ध छन् !
विद्यालयमा ७ जना विद्यार्थीलाई ५ जना शिक्षकले पढाउँदै